Kulanka Sariirta: 3 Arimood Oo Ninka Uusan Sheegeyn Balse Uu Rabo Inaad Ogaato | Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA Kulanka Sariirta: 3 Arimood Oo Ninka Uusan Sheegeyn Balse Uu Rabo Inaad...
Marka uu ninkaagu kuugu soo dhowaado rabitaan xagga sariirta ah, Waxaa jira shucuur ku gadaaman, shucuurtaas oo aanad ogaan karin inay aad u awood badan tahay.
Sii wad akhriska si aad waxbadan ubarato.
1. “Wuxuu ubaahanyahay in la dareensiiyo rabitaan.”
Badanaa haweenku waxay u maleeyaan in galmadu ay ugu horreyn ninka u tahay baahi jireed, laakiin taasi maahan inta badan waxa socda. Markay afadiisa u jawaabto isaga – ama ay iyadu bilowdo rabitaanka shaqada sariirta! – waxay la kulantaa baahi qoto dheer oo xagga shucuurta ah inuu dareemo in xaaskiisu ay isaga rabto.
2. “Wuu ku jecelyahay wuxuuna doonayaa inuu kuu soo dhowaado.”
Dumarku caadiyan waxay rabaan inay dareemaan inay kuugu dhow yihiin banaanka si ay u dareento inay kuugu dhowdahay qolka jiifka. Laakiin rag badan, markay dareemaan inay xiisad jirto, markay kala fogaansho jirto, markay ogaadaan inay wax uun qaldanyihiin ama xaaladdu aysan wanaagsaneyn… ayay u tegaan xaaskooda.
Run ahaantii, galmadu waa mid ka mid ah waqtiyada kaliya ee ninka ay maskaxdiisu sii deyso oxytocin, oo loogu yeero hormoonka jaceylka kaasoo keena dareen maxabo iyo isku soo dhowaansho.
Markuu arrintaas kuugu yimaado, waxaa laga yaabaa inaad layaabto oo aad dhahdo “ma rumaysan karo in hadda oo aan isku dhacsanahay oo aan dagaashanahay uu rabo kulanka raaxada. Laakiin taa baddalkeeda, garwaaqso: inuu kuugu yimaaday si uu dib ugu soo celiyo dareenkaas isku kiin soo dhaweynaya ee uu ku taamayo.
3. “Runtii waa uu nugulyahay markaas.”
Sababtoo ah galmada waxay u badan tahay baahi shucuur uu ninku qabo marka loo fiiriyo mida jir ahaaneed. Rag badan oo ka qeyb galay cilmi baaris la sameeyay ayaa sheegay inaysan jirin waqti uga cabsi badan oo ay ka nugulyihiin marka loo eego markay xaasaskooda sidaas ugu dhowaanayaan.
Wuxuu banaanka soo dhigayaa rabitaankiisa isagoo xamaasadeysan kuna weydiisanaya kulanka raaxada. Markay haweenku daalanyihiin ama damac uusan ku jirin waxaa laga yaabaa inay si fudud ugu gacan seeraan ama uga diidaan ninka dalabkiisa waliba diidmo dhaawac qotto dheer u geysata qalbiga ninka.
Sidaa darteed, haddii aadan rabitaankiisa u fulin karin oo aadan waqtigaas awoodin ama aadan u baahaneyn kulanka waxaa aad muhiim u ah inaad u sheegto sida uu kuugu weynyahay iyo sida aad u jeceshahay ninkaaga, adigoona u ballan qaadaya kulanka habeen kale.
Previous articleSheekada muragada leh ee lamaanihii sagaalka maalin kaliya is-qabay ee lagu dilay weerarkii Hotel Afrik
Next articleWaxtarka Mirahan Ay U Leeyihiin Saxidda Xeydka Soo Daaha & Kobcinta Ugxaanta
hussein mohammed February 3, 2021 At 7:28 am
Manshaa allaah waa fikir iga maqnaa
Healthy fighting makes a couple stronger
Amy Schumer Says “Yes”, Marries Chef Chris Fischer After A Few...
3 Astaamood Oo Lagu Garto Marka Ninkaagu Jecelyahay Haweeney Kale (Lambarka...